Posted by ကို Tranquillus | 10 ပင်လယ်, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
ယနေ့တွင်, အီးမေးလ်လွယ်ကူခြင်း, အမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုနှငျ့ဆကျသှယျဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖလှယ်မှုဘို့ကအသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးရေးသားဖို့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ကအချို့သတ်မှတ်ချက်, စည်းမျဉ်းများနှင့်အကွံဉာဏျတွေ့ဆုံရန်ဖြစ်ရမည်ကျနော်တို့ဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
တခါတလေအီးမေးလ်တဲ့ professional အခြေအနေတွင်စီမံခန့်ခွဲရန်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ကိုရေးသားဖို့ကိုလိုက်နာဖို့အစီအစဉ်အားလုံးလိုအပ်သောဒြပ်စင်အတိုများနှင့်တိကျသောဖြစ်ခြင်းလက်ခံသူမှမရရှိနိုင်စေရမည်ဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအရာဝတ္ထု
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင်အီးမေးလ် ၁၀၀ လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုဖွင့်ရန်အားပေးရန်သင်၏အီးမေးလ်အကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ရမည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများရှိသည် -
သင်၏အီးမေးလ်ဖွင့်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်စာလုံးရေ ၅၀ အထိပါမည့်အကြောင်းအရာကိုကျွမ်းကျင်သူများကအကောင်းဆုံးအကြံပြုလိုပါသည်။
သင်သည်သင်၏ဘာသာရပ်ရေးသားဖို့ကန့်သတ်အာကာသသာရှိသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုရဲ့ contents တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်အရေးယူကြိယာသုံးပြီးတိကျတဲ့အရာဝတ္ထုများ၏ရွေးချယ်မှုပါစေ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ရှည်လျားတ္ထုညံ့ဖျင်း ပို. ပို. အီးမေးလ်များကိုစစျဆေးဖို့ပညာရှင်များအသုံးပြုသောဖြစ်လာသည့်စမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင်ကစားနေကြသည်။
သင့်အီးမေးလ်ရဲ့ subject 2-Customize
ဖြစ်နိုင်လျှင်, ငါတို့သည်အရာဝတ္ထုမှာသင့်အဆက်အသွယ်များ၏အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသောဖော်ပြထားခြင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာပွင့်လင်းနှုန်းထားများတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုက Element ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရပ်လိုင်း၌သင်တို့၏လက်ခံရရှိသူ၏အဆက်အသွယ်ဖြင့်, ကသင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖတ်ရှုဖို့သူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်အရာ, တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ကိုရေးသားဖို့, ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘာသာရပ်ကနေထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲနှင့်စတိုင်နှင့်တင်ပြချက်အချို့စံချိန်စံညွှန်းများပေါ်တွင် အခြေခံ. အနေဖြင့်သင့်အီးမေးလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရေးသားဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုအများစုသည်အသုံးပြုသူအားစာသား၏စာလုံးပုံစံနှင့်စတိုင်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ စီးပွားရေးအီးမေးလ်တစ်ခုရောက်သောအခါ Times New Roman သို့မဟုတ် Arial ကဲ့သို့သောဂန္ထ ၀ င်စာလုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒါဟာအလှဆင် font ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။
ရေးထား-2 ကောင်းသော salut
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် (ဥပမာအသစ်တစ်ခုကို client) အတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံစာရေးပါကမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပြီးခေတ္တမျှသင်၏အသတင်းစကား၏ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းပြရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
Emoticon သို့မဟုတ် emojis;
လက်မှတ်ချမှတ်ရန်သေံသုံးစွဲဖို့, နှင့် salut ကနေရှေးခယျြဖို့အတှကျအီးမေးလ်တစ်စောင်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့, ထင်ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အလွန်ပြဌာန်းဘာသာစကား။ ဒါဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိနှင့်အီးမေးလ်အဆုံးမှာအသုံးပြုခွင့်ဖော်မြူလာရွေးချယ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကကြီးကြပ်သူသို့မဟုတ် client တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုရင်သင့်တော်တဲ့စကားစုဖြစ်တဲ့“ အကောင်းဆုံးလေးစားမှု” ကိုသုံးနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ကို“ ကောင်းမွန်သောနေ့၏အဆုံး” ဟူသောအသုံးအနှုန်းဖြင့်အဆုံးသတ်နိုင်သည်။ "
မျဉ်းတစ်ကြောင်းလျှင်စာလုံးရေ ၇၀ ထက်မပိုစေရ။
သင်၏ပထမအမည်နှင့်နောက်ဆုံးအမည်၊ သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ ကုမ္ပဏီ၏အမည်၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ၊ သင်၏တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်နှင့်သင်၏ LinkedIn သို့မဟုတ် Viadeo ပရိုဖိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီ Y ကို၏ကိုယ်စားလှယ်
ဖုန်း။ : 06 00 00 00 00 / Fax: 06 00 00 00 00
မိုဘိုင်း: 06 00 00 00 00
ကျွန်ုပ်တို့အထူးကောင်းစွာသိသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် "hi", "friendships", "see you" ကဲ့သို့သောဖော်ရွေသောဖော်မြူလာများကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကို ကျေးဇူးပြု၍ လက်ခံပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ဆာ၊ Madam၊
ကျွန်ုပ်၏စိတ်ရင်းမှန်နှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သမှုကို ကျေးဇူးပြု၍ လက်ခံပါ။
သင့်ထံမှဖတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်, ငါ့အမြင့်ဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစား၏အာမခံ, Sir / Madam, လက်ခံပါ
ကျွန်ုပ်၏ကျေးဇူးတင်မှုဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ထူးခြားသောခံစားချက်များ၏ဖော်ပြချက်အရ Sir / Madam၊
ဒါဟာလက်ခံရရှိသူထံသို့စေလွှတ် attachment များကိုများ၏အရွယ်အစားနှင့်အရေအတွက်ကိုဖော်ပြစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
focus: အဆိုပါ inverted ပိရမစ်
ဒါခေါ် inverted ပိရမစ်နည်းလမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို၏အဓိကသတင်းအချက်အလက်အားဖြင့်သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်စာသားစတင်ထို့နောက်အရေးပါမှု၏အမိန့်ဆင်းအတွက်အခြားသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူဆက်လက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
များသောအားဖြင့်ပထမစာကြောင်းသည်သတင်း၏ကျန်အပိုင်းများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိရမယ် ပြောင်းပြန်လှန်ထားသောပိရမစ်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာဖတ်သူ၏အာရုံကိုအလွယ်တကူဖမ်းယူနိုင်ပြီးအီးမေးလ်ကိုအဆုံးသို့ဖတ်စေလိုသည်။
အပိုဒ်နှုန်းတိကျတဲ့စိတ်ကူးအာရုံစိုက်နေစဉ်အရေးအသားများအတွက်ကြောင့်,34 လိုင်းများအသီးအသီးမှအများစုမှာလေးခုအပိုဒ်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
သင်နားလည်ထားသည့်အတိုင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်တစ်ခုသည် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးထံ ပေးပို့သည့်တစ်ခုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ စာထဲမှာ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းတွေရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း၊ သင်သည် သင်၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အီးမေးလ်၏ ဘာသာရပ်နယ်ပယ် (သို့မဟုတ် ဘာသာရပ်) ကို မှန်ကန်စွာ ရေးသားရပါမည်။ တိုတိုနှင့် ပြတ်သားရမည်။ သင့်အီးမေးလ်လက်ခံသူသည် သင့်အီးမေးလ်၏အကြောင်းအရာကို ချက်ချင်းနားလည်ရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ချက်ချင်းဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် နောက်မှဖတ်ရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
သင်ကောင်းစွာနားလည်ထားသည့်အတိုင်း၊ စကားစပ်ရာတွင် နှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ယဉ်ကျေးခြင်းဖော်မြူလာကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါအမှားများကိုပြင်ပေးဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့ copy နဲ့ paste သင့်အီးမေးလ်စကားလုံးတစ်လုံး Processor ကိုပေါ်နဲ့ automatic စစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီ software ကိုအားလုံးအမှားများကိုပြင်ပေးပါဘူးပေမယ့်, သင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်တဲ့ professional ဆုံးမခြင်း software ကိုပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်နိုငျသညျ။
သင်၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးမျိုးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြ, သင့်ကုမ္ပဏီ ... သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုအလျင်အမြန်ပြုသူနားလည်ပါသည်။
ယေဘုယျအားဆိုလျှင်, မေးလ်ကိုဖတ်ခံရဖို့အလားအလာနည်းပါသည်။ သငျသညျအီးမေးလ်သာသူ့ကိုအမှာစကားသောလက်ခံရရှိသူခံစားခဲ့ရပါပြီ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်အရာဝတ္ထု customize နှင့်သင့်အီးမေးကိုဖွင့်ဖို့မွေးစားခံရရန်ပုံသေနည်းကိုရွေးချယ်ရပါမည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အုပ်စုလိုက်အီးမေးလ်ဖြစ်ပါကသင်၏လက်ခံသူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာများ၊ စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်တည်နေရာများအရကွဲပြားသောစာရင်းများကိုဖန်တီးရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်လက်ခံရရှိသူများ၏ segment သည်သင်၏အီးမေးလ်များ၏နှုန်းထားကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ကိုရေးသားခြင်းအားဖြင့်, အစဉ်မပြတ်သင်လက်ခံရရှိသူဖွင့်ချင်ပါစေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုတိုက်ဆိုင်သည့်သင်၏မေးလ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖတ်ပါတွန်းကြောင်းပထမဦးဆုံးဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အရာဝတ္ထုဖို့ရောဂါပျောက်ကင်းပိုပြီးအရေးပါမှုပေးနဲ့တတ်နိုင်သမျှကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုလုပ်ထို့ကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အထင်မြင်မှားစေသောနှင့်လိုက်စားအရာဝတ္ထုကိုရှောင်ရှားရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဖြင့်သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်ကသင်၏ရုပ်ပုံလွှာ (သို့မဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီ) အီးမေးလ်ပို့ကြောင်းသတိပြုပါ။ အဆိုပါအရာဝတ္ထုသင့်အီးမေးလ်ရဲ့ contents မှကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။
စာနာမှုဆိုတာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အီးမေးလ်အကြောင်းအရာကိုစနစ်တကျရေးပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန်မိမိကိုယ်ကိုလက်ခံသူ၏နေရာတွင်ထားရမည်။ သင်အဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့သူရဲ့ဖိနပ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပြီးသူကိုယ်တိုင်မေးနိုင်တဲ့မေးခွန်းများစွာကိုစာရင်းပြုစုရမယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အီးမေးလ်ခေါင်းစဉ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တုံ့ပြန်မှုများမှဖြစ်သည်။
9-အသုံးပြုမှုတဲ့ professional အီးမေးလ်လိပ်စာ
lovelygirl @ …သို့မဟုတ်လူကြီးလူကောင်း @ ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိပ်စာများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအီးမေးလ်လိပ်စာကို အသုံးပြု၍ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူကိုမည်သည့်အခါကမျှမဆက်သွယ်ပါ။
အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေးကိုတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး, တိကျတဲ့ဝေါဟာရတစ်ခုစုံစုံစာသား, ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့တောငျးဆိုခကျြမြားနှငျ့စံနမူနာစာလုံးပေါင်းလိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြောင့်စည်းမျဉ်းများ, အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်ချမှတ်ခုနှစ်, သငျသညျခကျြခငျြးသငျ့ရဲ့လက်ခံရရှိသူစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားမြှင့်လိမ့်မည်သည့်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအီးမေးလ်, ရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
သူ့အလုပ်အီးမေးလ်များရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို ဇန်နဝါရီလ 21st, 2021Tranquillus
လွန်ခဲ့သောအဆိုပါအစီရင်ခံစာ:4မရှိမဖြစ်အမှတ်အဆိုပါအောင်မြင်မှုသည်ကိုသိရန်